Ka soo qaado biilka safarkaaga ee habeynta safarka Award Winning Tour Operator ee Odisha | Call @ + 91-993.702.7574
Namaskaar!... iyo salaan ka timid dalka Jagannad.Bhubaneswar - magaalada macbadka; caasimadda Odisha waa hooyaday. Odisha, oo ku takhasusay hidaha dhaqanka, dhaxalka dhismaha iyo qashinka qarsoon ee u dhaca si ay u noqdaan ruuxa India. Meelaha quruxda badan, calaamadaha calaamada ah, xeebaha jilicsan, soo jiidashada xayawaanka duurjoogta ah iyo beeraha qaranka, xayawaannada xayawaanka ah ee guuritaanka ee qulqulka Chilika ayaa si joogta ah u socdaalaya. Waxaan doonayay in aan quruxdaas u soo bandhigo aduunka oo idil, waxaanan ka mid nahay Agaasimaha Guud ee Award Winner Tourist ee Odisha adeeggaaga.
Waxaan soo gaadhay qadiyad aad uwanaagsan aniga iyo carruurnimadayda. Tani waxay igu dhiirigelisay inaan horumariyo warshadan oo aan baaro guul gaadhka buuxa ee si dhab ah u dhiirigalin kara fasax ama booqasho martida. Waxaan ku faani karnaa in ay yiraahdaan, sanado yar gudahood, dadaal badan iyo dadaal adag ayaan nahay hadda Agaasimaha Dalxiiska ee Award Winner ee Odisha. Tani waa macnaheedu yahay "My Dream Children" Tour 'n' Travels (I) Pvt Ltd waxay u timaaddo si ay u iftiimiso. Waayo-aragnimadayda iyo ka qayb-qaadashada warshadaan, waxaan leeyahay awoodda aan ku ururiyo koox diyaar ah oo aad u ballaaran shaqaale khibrad leh oo si fiican uga gudbi doona waajibaadkooda si ay u siiyaan martida martida leh khibrada safarka ugu fiican.
Maanta waxaan baalalkeena ku faafinay New Delhi iyo Kolkata waxayna ka shaqeynayaan mitirro kala duwan oo Hindiya ah oo leh rabitaan wanaagsan iyada oo gacan ka heleysa Wasaaradda Dalxiiska, Dowladda Odisha iyo Dawlada Hindiya. Inay noqoto Award Winner Tour Operator ee Odisha, fikradda ugu wayni waa in la siiyo dadka safarka waayo-aragnimo nololeed, sanduuq buuxa xasuusiyo iyo wajiyo farxad leh.
Tani, waxaan jeclaan lahaa in aan si ballaaran u soo dhaweeyo qof walba si uu u soo booqdo qarankeena quruxda badan iyo quruxda badan iyo inaan la kulanno heerkiisa hoose. Waa filitaan aan runta ah in martidu ay isku dayi doonaan inay tixgeliyaan baadhitaanka indha-indheynta iyo jilicsanaanta Hindiya. Waxaan jeclaan lahaa in aan kuu xaqiijiyo in khibradiisa ay ku jiri doonto xusuusta waqtigii loogu talagalay.
Dhamaantigayga ugu fiican dhammaantiin iyo rajadaada ku soo dhawow Odisha.
MD, Sandbaalis Cagaaran